Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Nov 2/2021 | OROMOTV
Bilisummaa uummata keenyaafi Walabummaa biyya keenyaaf malee aangoo abbaa irree tiksuuf hin duullu.
Waggoota 50 dura Qabsoon Bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromootiin hogganamee yommuu eegalu akeeka ifaa fi mul’ataa qabateeti. Akeekni ifaa Qabsoon Bilisummaa Oromoo qabatee hundeeffame ka’e kun Oromoon biyya isaa irratti abbaa akka ta’u, hiree mataasaa akka ofiin murteeffatudha. Mirgi abbaa biyyummaa Oromoon lafa isaa bara weerara Minilik dura tureetti deebi’ee abbaa akka ta’ee hogganatuufi waan irri lafa Oromiyaa fi jala isheetti argaman Oromoon akka itti fayyadamudha. Kana erga gonfatee booda ammoo saboota biyyattii waliin haala waliin jiraatu irrattimmoo hireen ummata Oromoof kennamee uummatichi dhiibbaa tokko malee hiree isaa mataasaan akka murteeffatu gochuudha. Kana seerri addunyaa kan deeggaruufi jajjabeessu ta’uun itti qoratamee akka kaayyoo bu’uuraatti qabatamee kan socho’amaa har’a ga’amedha.
Adeemsa waggoota 50 ol fixe kana keessatti wareegamni ulfaataan kaffalamee bu’aawwan gurguddoo kan hin tuffatamneefi hin waakkatamne argamaniiru. Har’as garuu uummanni Oromoo gabrummaa dhufaa darbaan irratti wal jijjiiru irratti qabsaa’aa, wareegama kaffalaa jiraatus biyya isaa Oromiyaa irratti abbaa hin taane, hiree isaa hin murteeffanne. Ammallee kaayyoo qulqulluu kana bira geenyee uummata keenya dheebuu bilisummaa baasnee abbaa irree ofirraa garagalchinee mootummaa uummataa ijaaruuf qabsoo hadhooftuutti jirra. Haga galma geenyuutti itti fufuufis irbuu seennee waadaa haaromfannee wareegama ulfaataa kaffalaa, fuulduratti tarkaanfachuutti jirra.
Akkuma hunduu quba qabu haalli siyaasa Itoophiyaa keessaa saffisa guddaadhaan jijjiiramaa jira. Teessoon abbaa irree kirkiree qarqara boollaa ga’eera. Kana gochuu keessatti qooda guddaa kan qabu Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti hojii hojjetamedha. Kanaaf ammoo qoodni Adda Bilisummaa Oromoo olaanaafi ol ba’ee cululuqee kan mul’atudha. Addi Bilisummaa Oromoo hojii karaa waraanaa hojjetuun Waraana Bilisummaa Oromoo leenjisee bobbaasuudhaan, hawaasa keessatti caasaa siivilii Qeerroo Bilisummaa Oromoo ijaaruudhaan, hojii siyaasaafi dipilomaasii hojjechuudhaan qooda guddaa kennee jira.
Waggoota sadan darban kana keessattis sochii abbaa irree jala bu’uun saaxilaafi wareegama kaffalee dura dhaabbachaa kan tureefi jiru Addi Bilisummaa Oromoo akka haalli siyaasa biyyattii saffisaan jijjiiramu kana keessatti gumaacha olaanaa kenne.
Waraanni Bilisummaa Oromoo sochii isaa sadarkaa olaanaatti guddisuudhaan guutuu Oromiyaa keessatti sochii diinaa ugguree teessoo abbaa irree ollachiiseera. Qeerroon Bilisummaa Oromoo sochiin hawaasa keessaa danqamaa deemuudhaan baayinaan gara Waraana Bilisummaa Oromootti makamee qabsoo hidhannoo geggeessuu jabeessee itti fufee diina ba’aafi gala dhorkee jira. Amma sochii diinaa ugguruu fi tarkaanfii fudhachuu qofa utuu hin taane, guutuu Oromiyaa keessatti sadarkaa uummata ofii ittisuufi caasaa bulchiinsaa diriirsuu irra ga’ee jira. Lolli guutuu biyyattii keessatti hammaachuudhaan yeroo ammaa Itoophiyaan qarqara diigumsaa irra jirti.
Murni abbaa irree Abiy Ahimediin durfamu rakkoon biyyattii karaa nagaafi marii siyaasaatiin akka furamu dhiibbaan keessaafi alaa geggeeffamus, fedhii dhabinnaafi aangootti cichuu murna kanaatiin waamichi mariifi karaa nagaan rakkoo furuu gufate. PPn nagaa jibbee lola filate impaayerri Itoophiyaa kun akka deegamtuuf qooda kennaa jira. Murni kun aangoo ofii humnaan tikfachuuf ilmaan iyyeessaa dirree waraanaatti bobbaasee ficcisiisaa akkuma ture, ammas sadarkaa Federaalaaafi Naannoleetti dargaggootaaf waamichi waraanaa taasisaa jiraachuu argina.
Waamichi PPn maqaa Oromiyaan of waamtu duula waraanaa gatii hin qabnetti erguuf dargaggoota Oromoof taasisu fudhatama kan hin qabneefi lola hiika hin qabne irratti namuu hirmaachuuf yaadasaa akka hin qabaanne cimsinee hubachiisna. Akkuma amma dura ibsaa turre lolli PP deeggaruudhaan hirmaatamu saboota Impaayera kana keessa jiran hundaafuu bu’aa kan hin qabneefi aangoo murna tokkoo dheeressuuf kan taasifamudha. Ammas irra deebi’uudhaan, dargaggoon Oromoo tokkollee waamicha gartuu kufaatiirra ga’ee kana dhaga’ee lubbuu ofii akka hin balleessine Qeerroon Bilisummaa Oromoo jabeessee hubachiisa.
Dargaggoonni Oromoo kan gochuu qaban:
– Uummata ofii waliin ta’uun murna abbaa irree kana ofirraa kaasuuf akka hojjetan
– Waraana Bilisummaa Oromoo waliin ta’uudhaan sochii diinaa danquufi Oromiyaa keessaa diina qulqulleessuu irratti akka hojjetu
– Caasaa bulchiinsaa Koreen Bulchiinsa Mootummaa Ce’umsa Biyyoolessaa Naannoo Oromiyaa (MCBNO) diriirsu waliin ta’uun akka jiruun Lammiilee Oromiyaa hin jeeqamne taasisuuf qooda isaa akka kennu gochuun dirqama ta’a.
Kanuma waliin, kufaatii sirna tokkoo booda mariin geggeeffamee Mootummaan Ce’umsaa tokko uumamuun waanuma aadaa addunyaa kanaa ta’e waan ta’eef, haala kana dursee hubachuun MCBNO Addi Bilisummaa Oromoo labsee KFOn deeggaruun caasaan bulchiinsaa guutummaatti diriirfamaa jiru keessatti qooda fudhachuudhaan biyya ofii baraaruun fardii akka ta’e hubachiisna.
Dhuma irratti, dargaggoonni Oromoo duula isaan duuluu qaban Oromoon bilisummaa akka argatu, biyyi Oromoo Oromiyaan akka walaba baatuuf duuluu qabu malee aangoo abbaa irree tiksuuf jecha duulee kufaatii murna kanaa kan hin oolleef lubbuu ofii akka malee balleessuun barbaachisaa akka hin taane hubachiisaa, Qeerroon Bilisummaa Oromoo dirqama isaa jalqabaa kaasee haga ammaa itti jiru kan itti fufu ta’uusaa mirkaneessina.
1 thought on “Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Nov 2/2021”
Pingback: Ibsa ABO: Yaadannoo Sadaasa 9 Guyyaa FDG Waggaa 16ffaa | OROMOTV